Tag: universal analytics | Martech Zone
Kpido: nchịkọta nchịkọta nke ụwa
Anyị na-emegharị ndị ahịa n'aka Google Tag Manager n'oge na-adịbeghị anya. Ọ bụrụ na ịnụbeghị banyere njikwa mkpado, anyị edeela isiokwu miri emi, Gini bụ Tag Management? - Aga m agba gị ume ka ị gụọ ya. Kedu ihe bụ Tag? Mkpado bụ obere koodu nke na-eziga ozi na ndị ọzọ, dị ka Google. Ọ bụrụ n'ijighị ihe njikwa mkpado dịka Tag Manager, ịkwesịrị ịgbakwunye snippets ndị a nke koodu